C/xaliim M. Muuse: Sheikh Siciid Axmed-jaar wax Jidh dil ah laguma samayn, Waxaanan Xukuumadda uga marti nahay inuu Caddaalad helo”Warsaxaafadeed | Salaan Media
C/xaliim M. Muuse: Sheikh Siciid Axmed-jaar wax Jidh dil ah laguma samayn, Waxaanan Xukuumadda uga marti nahay inuu Caddaalad helo”Warsaxaafadeed
Hargeya(SM)-Waxa aanan marna taageerayn, raallina ka noqon doonin fal kasta oo lid ku ah nabadgelyada iyo qaranimada dalka iyo shacabka reer Somaliland iyo Xaqa muwaadinkaba”sidaasi waxa qoraal uu soo saaray ku sheegay Wasiir ku-xigeenkii hore ee Ganacsiga Somaliland Cabdixaliim Maxamed Muuse oo ka hadlay Ganacsade dhawaan Ciidanka RRU-du ka soo qabteen Magaalada Burco shaki argagixiso loo xidhay .
Cabdi Xaliim Maxamed Muuse ayaa qoraalkiisan kaga xog-waramay xadhig hore loogula kacay Siciid Axmed Jaar oo ka mid ah Culimadda waaweyn ee Gobolka Togdheer laga ciseeyo, isla markaana xubin ka ah Guddida horumarinta gobolka iyo Jaamacadda Burco.
Siciid Axmed Jaar ayaa afar habeen ka hor isaga iyo saddex wiil oo dhalin yaro ah laga soo qab-qabtay guryahooda, iyadoo ay Ciidanku xili dambe Gurigiisa ugu daadteen dabadeed halkaasi ka soo kaxaysteen.
Wasiir ku-xigeenkii hore ee Ganacsiga Somaliland ee Xukuumadii Daahir Rayaale Cabdixaliim M. Muuse ayaa qoraalkiisan ku soo bandhigay mawqif sheikh hore uga qaatay eedeyn kasta oo looga soo jeediyo inuu wax gacan saar ah la leeyahay Kooxaha xag-jirka ah.
Waxaanu Qoraalkiisa ku bilaabay “Waxaanan filayaa in ay jiraan dad ay risiq u tahay wax ka sheegaygu.” Sheekh Siciid Axmed Jaar .
Aniga oo ku hadlaya magaca qoyska Sh. Siciid Axmed Jaar oo sida warbaahintuba baahisay qaab argagax leh looga wakhti 2 dii habeenimo ah looga soo xidhay magaalada Burco, isla habeenkiina loo soo gudiyay magaalada Hargeysa, waxaan ugu horreyn ku wargelinayaa dhammaanba eheladiisii iyo asxaabtiisa la gaadhsiiyay warka khaldan ee ah in la jidh dilay inaanay waxba ka jirin. shalay iyo saaka oo taariikhdu tahay 24 August 2013 waxa naloo ogolaaday inaanu aragno, si wacana u waraysano, nooma sheegin kumanaanu arag wax haba yaraatee jidh-dil ah oo lagu sameeyay.
Xog-ogaal warranka Sh. Siciid Axmed Jaar
Siciid Axmed Jaar maaha markii ugu horreysay ee tuhmad noocan ah loo xidho ama lagu eedeeyo, waxan xog-ogaal u ahaa laba goor oo hore oo xukuumaddii aan ka tirsanaa Siciid lagu soo eedeeyay inuu Shabaab xidhiidh la leeyahay, balse labada goorba maanu helin wax cad oo markhaati u noqon kara eedaynta loo haystay, mar walbana waxa loo qoray warqad caddaynaysa inaan wax dembi ah oo lagu xidho lagu helin.
Sh. Siciid waxa uu ka mid yahay culimada magaca ku leh Gobolka Togdheer, waa nin ganacsade ah, waa aqoonyahan shahaadada Master of Economics ka qaatay dalka India sannadkii 1987 kii. Wuxuu ka mid yahay Guddiga Jaamacadda Burco, Guddiga Horumarinta Gobolka Togdheer, Maamulka sare iyo Board-ka shirkadda isgaadhsiinta ee AFROL.
Wuxa uu hore warbaahinta uga caddeeyey inaanu wax xidhiidh ah la lahayn Al Shabaab iyo Urur diimeed hubaysan midna.
Waxa uu sheekhu caddeeyey in marku ogaaday in la daba socdo uu markiiba u yimi Guddiga Nabadgelyada Gobolka Togdheer oo uu Badhasaabka iyo Taliyaha Boliskaba uga warramay dhawrka jeer ee gurigiisa la yimi iyo gawaadhida timi, isla markaana ka codsaday in haddii ay wax uga baahanyihiin aan carruurta iyo guriga loo daba marin ee ay u caddeeyaan wixii jira, diyaarna uu u yahay balse nasiibdarro qaabkaa argagaxinta leh lagu soo xidhay.
Baaq iyo Codsi ku aadan Xukuumadda JSL
Annaga oo ogsoon in tuhmad iyo wanjal ama nacayb diimeed si gaar ah qof warbixin khalad ah looga been abuuran karo, isla markaana aanay dembi ku yeelay Karin ciidanka nabadgelyada ee mar walba heeganka u ah amniga qaranku.
Waxaanu Xukuumadda gaar ahaan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ugu baaqaynaa kana codsanaynaa inuu Arrinta Sheekhaas (Sh. Siciid A. Jaar) iyo dhalinta yaryar ee lala soo xidhay si gaara Xog-ogaal ugu noqdo.
Waxaan ugu baaqayaa Wasiiradda Burco kulanku ku dhexmaray odayaasha beesha Sheekha iyo dhalinyarada kaleba, inay si dhakhso ah uga dhabeeyaan ballantii ay odayaasha soo wada galeen.
Waxa aananu marna taageerayn, raallina ka noqon doonin fal kasta oo lid ku ah nabadgelyada iyo qaranimada dalka iyo shacabka reer Somaliland iyo Xaqa muwaadinkaba.
Waxaan ugu dambayn codsanaynaa in Sh. Siciid A. Jaar caddaalad helo, beeshiisuna wixii tallaabo ee sharci ah xaqdhawrto.
Caddaalad ayaa cid walba raalli gelin karta.
Cabdi Xaliim Maxamed Aw Muuse
Wasiir ku Xigeenkii hore ee Ganacsiga
NB. Fadlan halkan hoose ka akhri Warsaxaafadeed uu sheekhu sannadkii 2009kii ku bayaamiyay mawqifkiisa.